Waa kuwee AFARTA xiddig waa weyn oo ay Man United la saxiixan karto bisha January? – Gool FM
Waa kuwee AFARTA xiddig waa weyn oo ay Man United la saxiixan karto bisha January?
(Manchester) 01 Jan 2021. Manchester United ayaa ku jirta kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, inkasta oo ay taasi jirto, haddana maamulka Red Devils ayaa ka faa’iideysan doona fursadaha ka jira suuqa si ay u xoojiyaan kooxda.
Ciyaartoy dhowr ah ayaa beeca xurta ah lagu heli karaa inta lagu gudi jiro dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaana suurtogal ah in wadahadalada ku aadan heshiisyada ay biloowdaan inta lagu gudi jiro bishan January.
Wargeyska “Daily Express” ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan afar ciyaartoy uu ka fiirsanayo ku xigeenka madaxa fulinta kooxda Manchester United ee Ed Woodward.
Lionel Messi ayaa hoggaaminaya, maadaama halyeeyga reer Argentina uu awood u leeyahay inuu la heshiiyo koox kasta uu doonayo inuu la saxiixdo si uu ugu biiro suuqa xagaaga soo aadan ee sanadkan 2021.
Waxa kale oo jira Manchester City iyo Paris Saint-Germain oo ka mid ah kooxaha fursadaha waaweyn ka haysta loolanka loogu jiro saxiixa Messi.
Ciyaaryahanka labaad waa Sergio Ramos, kaasoo aan weli ogolaanin inuu qandaraaska u cusbooneysiiyo Real Madrid, iyadoo laga war qabo in Man United ay dhibaato ka heysato dhanka daafaca, wuxuuna u noqon karaa xoojin weyn.
Wargeysku wuxuu intaa ku daray in daafaca kooxda Bayern Munich ee David Alaba iyo sidoo kale Memphis Depay ay qeyb ka yihiin xiddigaha ay ku fikireyso kooxda Man United marxaladda soo socota.
Van Dijk oo dhiiragalin weyn ka helay Seedorf, xilli uu ka soo kabanayo dhaawacii weynaa ee soo gaaray
Kooxda Barcelona oo ku dhow inay dhameystirto heshiiska Eric Garcia